Nzira Yokutengesa Nayo Zvakachengeteka Uye Dzivisa Malware - Mazano Anobva Semalt
Anoshandisa Android anoda kurinda nguva dzose kana achishandisa internet. Indaneti inotakurwa naTrojan uye mavairasi anogona kukonzera kukuvadza kukuru kune foni uye nemunhu wega wega. Inzwi rakagadziriswa rinobudiswa kune vashandisi vekombiyuta kuburikidza nekombiyuta Apps uye inowanzotarisana nevanotengesa uye malware iyo inogona kutarisa unhu hwekuzivikanwa uye con - avene nutritive rich. Iro internet, saka, inoda kuendeswa nehanya nekucherechedza nzira dzekuchengetedza pamashandisirwo akachenjera anoshandiswa.
Max Bell, Mutungamiri Wekubudirira Kwevatereji ( Semalt , anopa mazano akajeka pamusoro pokuti ungaramba wakachengeteka sei kubva kune utachiona uye malware paunenge uchishandisa internet paunofunga.
Chenjerera pane zvingaita
Kuparidzira pamapuraneti kune nzira dzinoshandiswa nevashambadzi kuisa malware neTrojans kuvashandisi vepaIndaneti. Kushandura zviziviso zvehove zvinowanika pamapeji ewebhu akashanyira anotora software yakaipa iyo ine mavairasi kana kuongorora uye inogovera mabasa efoni yeHerodhe nevashambadzi. Trojan uye mavairusi akabatanidzwa pamapapanhau anobuda anouya mumhando dzakanaka dzakadai sedhiyo isina kubvunzwa antivirus software. Nguva dzose ramba uri mutariri.
Usaita chinhu chisina mvumo
Zvakajeka kuti zvinhu zvisiri pamutemo paIndaneti zvinogona kuva nengozi.Indaneti dzinopa kugovera mafaira akadai semitambo yemavhidhiyo, torrent mafirimu, mimhanzi, uye software zvinogona kuita kuti kushandiswa kwemarware uye mavairasi kune vateereri. Zvinokosha kutora kana kukanda mafaira kubva kune nzvimbo dzekutendwa kuti udzivise Trojan uye zvinonyangadza. Mavharesi anokwira mumafaira akagoverwa anowanikwa mune zvisiri pamutemo kugoverana mawebhusayithi anogona kuba uye kugovana mashoko evanhu pachavo achishandisa malware akabatanidzwa mune zvitsva kunze kwekukanganisa mafaira ekutsvaga. 8)
Nguva dzose chengetedza shanduro kusvika kune imwe
Kushandiswa kweshanduro yakasimbiswa pafoni kunoratidza kuti munhu anorwisa mavirusi uye malware. Mushanduri anokwanisa kurwisana neTrojan ne-malware lowers nezera rayo. Chimbo cheAroid chinogona kudzivisa kurwiswa kubva kune mavairasi paunoshandisa zvakadai seChrome, Firefox uye Opera zvakaenzaniswa neS Safari, Internet Explorer uye Netscape. Sarudza nokuchenjera musikana wekutsvaga pafoni kuti uchengetedze kuchengeteka kubva kune malware uye mavairasi.
Tsvaga zvibvumirano zvinodiwa
Pamberi pekuiswa kwezvidzidzo zvekudzivirirwa, mapurogiramu anobvunza mvumo zvichienderana nezvinodiwa kuti vaite pane Android device. Kunyange zvazvo mamwe mapurogiramu achange akumbira kupinda kune vatinonyore, internet kana ikamera, zvakakosha kuti unzwisise kukosha kwemvumo inodiwa nechimwe chikumbiro. Kugona kwechikumbiro kunogona kuzarura chigadziro zvakasiyana-siyana zvinotengesa paIndaneti kusanganisira mavairasi uye malware zvichienderana nemvumo yakakumbidzwa inoratidzwa panguva yekuiswa.
Shandisa maitiro kubva ku reputed App store
Nhanho imwe chete kuenda kunechengetedzwa kubva kune mavairusi uye malware pane mashizha akachenjera ari kuendesa Android mapurisa ndeyokudzikunura nekushandiswa kwezvikumbiro kubva kunyanzvi dzeApp store. App inoshandisa yakafanana neGoogle Google Play uye iyo inonzi Amazon Appstore inopa zvakadzama kuchengeteka checks kwezvose zvidzidzo zvakachengetwa mumabhuku avo. Kukanda mapurogiramu kubva kumawebhusayithi asina kuwandisa ayo dzimwe nguva anopa zvikumbiro zvekutengeserana zvemasununguko anobudisa iyo Android device kune yakawanda inokuvadza.
Zvidziviriro zvekuchengetedza zvakadai semagetsi e-antivirus zvinogona kuita kuti kuve nokunyorwa kwezvipurogiramu zvepurogiramu nemarware pa-android gadgets apo zvidzidzo zvinobva kune zvisingabviri.